Wasaaradda Caafimaadfka Puntland oo Tabobar u furtay Umulisooyinka Puntland. | puntlandi.com
Sunday, June 9th, 2013 | Posted by admin admin
Wasaaradda Caafimaadfka Puntland oo Tabobar u furtay Umulisooyinka Puntland.
Wasaaradda Caafimaadka ee dawladda Puntland ee Garoowe ayaa tabobar u furtay umulisooyin ka kala yimid gobollada Puntland . Illamaa 50 Umulisooyin ayaa hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka Puntland isugu yimid si loo siiyo casharo la xiriira Umulinta, xannaanada dhallaanka iyo hooyada iyo duruus kale oo la xiriirta dhalmada ka dib, nadaafadda , iyo qaabka dhalitaanka.
Munaasabad lagu daah furayay tabobarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay masuuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka oo uu kamid yahay wasiir ku xigeenka caafimaadka Dr. Maxamed Xirsi Ducaale, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dr. Abdirsaaq Xasan Xirsi, madax waaxeedyo, iyo madax kale oo ka socotay hay’adda UNFPA oo ah ay si wada jir ah tabobarkan usoo wada agaasimeen wasaaradda caafimaadka.
Tabobarkan wuxuu socon doonaa muddo 10 casho ah waxaana sidoo kale uu ka furmay magaalada Boosaaso oo ayana tabobar loogu qabtay umulisooyin ka kala yimid gobolka Bari iyo gobollada Puntland ee dariska la ah sida Sanaag iyo Karkaar.
Tobanka maalmood ee tabobarka u socon doono umulisooyinka ka kala yimid gobollada Puntland,a yay ku baran doonaan ,umulinta hooyada, nadiifinta inta lagu iro dhalmada, taxaddarka hooyada iyo ilmaha dhashay, daawo siinta wanaagsan, sida quman ee mandheerta iyo xudduntaba loola tacaalo xilliga dhalmada, .
Inta lagu jiro tabobarkan umulisooyinka waxaa loo daari doonaa cajalado video ah oo muujinaya qaabka dhalmada iyo dhalinta wanaagsan.
Umulisooyinka qudhooda ayaa ka qayb qaadan doona tabobarkan , fikradohoodana ka dhiiban doona goobta casharadu ka socdaa.
Wasiir ku xigeenka caafimaadka Puntland Dr. Ducaale ayaa sheegay in tabobarkan uu wax wayn ka tari doono aqoonta umulisooyinka, uuna ka dhigi doono umulisooyin xirfad yahan ah oo dhalin kara ilmo bad qaba.
Waxa uu ugu baaqay inaysan casharadan dayicin oo siday tahay uga faa’iidaystaan, ugana faa’iideeyaan dumarka kale ee lamid ka ah.
Wasaaradda Caafimadka Puntland